बानेश्वरमा भव्य विवाह पार्टी, दुलाहा प्रहरीको फन्दामा! « Deshko News
बानेश्वरमा भव्य विवाह पार्टी, दुलाहा प्रहरीको फन्दामा!
काठमाडौँ , फागुन १५
काठमाडौँ प्रहरी परिसरका डिएसपी होविन्द्र बोगटीका अनुसार आफूलाई इन्जिनियर भने पनि बस्नेतको दाबी पुष्टि गर्ने आधार देखिएको छैन । उनले के कारणले यस्तो गरे भन्ने खुलेको छैन । उनलाई आपराधिक विश्वासघात ठगी मुद्दा चलाउने भइरहेको छ ।